Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Dhalinta ee Jaaliyada Melbourn oo ku howlan dar dar galinta OYSU Melbourn
Maamulka Dhalinta ee Jaaliyada Melbourn oo ku howlan dar dar galinta OYSU Melbourn
Posted by ONA Admin	/ September 24, 2012
Taariikhda 23 /9/12 waxaa isugu yimid shir muhiim ah gudiga fulinta OYSU Melbourne, halkaas oo uu gudigu ku sameeyay is badal dhinaca dib u habaynta gudiga fulinta ah. Shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay gudomiyaha OYSU Melbourne Marwo Luul oo safar dheer ku maqneed iyada oo halkaa Gudomiyaha soo dhaweyn qiimi badan loogu sameeyay.
Gudomiyaha OYSU Melbourn ayaa ka warbixisay Safarkii ay ku maqneyd iyo Jaaliyadihi ay soo aragtay iyada warbixin aad loogu diirsaday kaga xogwarantay Dadaalka ay jaaliyadaha Ogadeniya ay kawadaan Goobihi ay soo martay.
Waxaa kale oo Munaasabadan kasoo qeyb galay Mudane Xasan Qubi oo dhalinyarada usoo jeediyay wacyi ku saabsan horumarka ururka Dhalinyarada iyo Wadashaqeynta Jaaliyaadka. Waxa uu mudane Hassan halkaas ku baraarujiyay in dhalinyartu yihiin xooga iyo maskaxda ay shacabka iyo halganka Ogadeniyana sugayaan.
Qudbadahaas kadib waxaa laguda Galay Ajendihi shirka. oo ay u muhiimsanaayeen laba qodob.
1. Qiimaynata shaqooyinka OYSU Malbourn
2. Qorshe Dajinta iyo ansixinta shaqooyinka Ururka ee soo socda.
Shirkan oo si cilmiyaysan u socday ayaa waxaa la qiimeyay shaqooyinki ururku soo qabtay iyada oo qiimeyn aad u heersareysa ay kasoo baxday shaqooyinka Ururka aadna loogu wada qancay. Waxaa kulankan lagu doortay oo lagu ansixiyay Hoggaamo cusub oo kamida maamulka OYSU melbourne iyada oo ammaan iyo sharaf loo soo jeediyay hogggaamadi ka horeyay ee xilalkaas soo guttay.
Qiimaynti iyo hanaan socodka Ururka kadib waxaa Xoghayaha OYSU Marwo Luul soo gudbisay qorshaha ururka iyada oo laga dooday. Wada tashi dheer kadib waxaa la go’amiyay qodobo ay ugu horeeyaan
In la xoojiyo Abaabulka dhalinyarada Melbourn ku nool iyada oo laqaban qaabin doono xaflado lagu casuumayo dhalinyarada Ogadeniya ee ku nool Melbourn si loo wada gaadhsiiyo dhalinyarta da’yarta ah si halgankooda loo baro ugana qeyb qaataan horumarka bulshadooda.
Hiddaha Iyo dhaqanka Ogadeniya oo ururka marar badan soo bandhigay ayaa kamid ahaa qodobada xooga in lasaaro lagu go’amiyay kulankan. Sidoo kale in la xoojiyo lana hirgaliyo “Action Plan”kii guud ee OYSU meelkasta oo caalamka ah ay ka fuliyaan.
Waxa barnaamijkan isna qodob xiiso lahaa in dar dar lagiliyo xidhiidhka bulsho iyo midka siyaasadeed ee Ururku iyo Jaaliyaduba la leedahay bulshada ay ku dhex nool yihiin ee Australiya. Xidhiidhadaas oo sii jiray ayaa qaabkii loo xoojin lahaa aad looga dooday go’amo wax ku ool ah oo la hirgalin doonana laga soo saaray.
Kulankan ayaa waxaa lagu bilaabay laguna gaba gabeeyay Aayado Quraanka kamid ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Halgame Liibaan. iyada oo loogu duceeyay bugtada iyo dhaawaca, dadka xabsiyada kujira, iy dhamaanba shacabka Ree Ogadeniya ee dulman in Allaah bogsiiyo intii dhaawac ah dhibkana allaah ka korqaado.
Ururka ayaa sidoo kale salaan iyo boggaadin u diray dadka u istaagay halganka gude iyo dibadba ee ay u horeyaan ciidamada qalabka Sida ee JWXO ee naftooda u huray sidii xoriyad waarta shacabkooda iyo dhulkoodaba u gaadhsiin lahaayeen ugana difaaci lahaayen cadowga gumeysiga ah.
qoodhay iyo xeraday waa sxbkay xassan qubbi mashaa alaaah aad iyo aad ayaan idiinku diirsannay shaqooyinka aad qaban haysaaan ee halgan ka waxaakale oon kurajjo waynahay in aan marlabaad xasan qubbi shaqo halgan wada qaban doono iskuna arki doonno Ogadenia oo xor ah insha alaaah well done
Hhhhhhh waleee qoladaasi nin ayey inaga dhaceen qisooow weerar intaaan ku qaadano aynu sooceshano guuleysta halgamayaaal guusha waxaa lehe gobanimo doonka